admin, Author at Sansar Dainik - Page2of 247
October 30, 2020 adminLeaveaComment on भयानक बन्दैछ, भिटामिन डीको कमी
भिटामीन ‘डी’ चिल्लोमा घुल्ने स्टेरोइडल (कोलेस्टेरोलबाट बनेको) भिटामिन हो । यो भिटामिन प्राकृतिक रुपमा धेरै कमखानेकुराहरुमामात्रपाईन्छ । क्यालसियम र फस्फोरस जस्ता महत्वपूर्ण खनिजतत्वहरुको उपपाचनका लागि आवश्यक यो भिटामिनको अभाव अहिले आम रुपमै देखिनथालेको छ । आन्तरिक रुपमा शरीर भित्रै पनि बन्न सक्ने हुनाले धेरै वैज्ञानिकहरू यसलाई भिटामिन नमानेर हर्मोन पनि मान्दछन् । श्रोत प्राकृतिक रुपमा […]
October 30, 2020 adminLeaveaComment on मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा धमला दम्पतीको हमला,हेरौं रमाइलो प्रोमो भिडियो
काठमाडौं । नेपाली हास्य व्यङ्ग्य बिधामा स्थापित नाम हो जितु नेपाल, उनै जितु “मुन्द्रेको कमेडी क्लब“ कार्यक्रम मार्फत दर्शकमाझ आएका छन् । इन्टरटेन्मेन्टको “मुन्द्रेको कमेडी क्लब“ कार्यक्रम मार्फत जिनु नेपाल आएका हुन् र शोको पहिलो भाग देखिनै युटुबमा राम्रो भ्यूज पाईरहेको छ । नेपाल टेलिभिजनबाट गत कार्तिक १९ गतेदेखि हरेक सोमबार राती ८:५० मा प्रशारण […]
धर्ती माताले पत्रकारलाइ त’र’बार देखाएपछि भा’गा’भा’ग, आश्रममा यस्तोसम्मको शक्ती देखियो (हेर्नुस् भिडियो)
October 30, 2020 adminLeaveaComment on धर्ती माताले पत्रकारलाइ त’र’बार देखाएपछि भा’गा’भा’ग, आश्रममा यस्तोसम्मको शक्ती देखियो (हेर्नुस् भिडियो)
धर्ती माताले पत्रकारलाइ त’र’बार देखाएपछि भा’गा’भा’ग, आश्रममा यस्तोसम्मको शक्ती देखियो गुल्मी | बुटबल घर भएकी विष्णु कुँवर अर्थात् ध’र्ती माता पहिले कलाकार थिइन्। उनी कलाकारितामा जम्न नसकेपछि माता बनेर युट्युवमा पहिलेदेखि नै चर्चामा रहेकी थिइन्।पछिल्लो का’ण्डबाट उनी अहिले फेसबुकतिर पनि चर्चामा छिन्। रेसु’ङ्गामा तीन महिना क’ठिन तपस्या गरेपछि ज्ञान पाएँ। अहिले सफल भएकी छु। दिनमा […]
श्रीमानलाई भारतमा लगेर मा’रीदिए, ७ जनाको परिवारमा कमाउने कोही नहुँदा भोकै (भिडियो सहित)
October 30, 2020 adminLeaveaComment on श्रीमानलाई भारतमा लगेर मा’रीदिए, ७ जनाको परिवारमा कमाउने कोही नहुँदा भोकै (भिडियो सहित)
काठमाडौ । लकडाउनकै समयमा कमाउन भन्दै भारत गएका बाँके कोहलपुरका एक नेपालीको भारतमै ह त्या भएको छ । पैसा कमाउनका भौतारिएका एक जना भारतकै एक जनाको सम्पर्कमा गएका थिए । तर उनको निधनको खबर आयो । तर जसको साथ लागेर उनी भारत गएका थिए उनी पनि सम्पर्कमा आएका छैनन् । उनको शव फेला परेको भन्दै […]
October 30, 2020 adminLeaveaComment on शान्ती श्रि परियारको आवाजमा सारा परदेशीलाई रुवाउने गीत (भिडियो सहित)
काठमाडौं / पछिल्लो समयको सांगितिक बजारमा नेपाली लोक गित संगित चर्चा परिचर्चामा रहेको छ । समस्त लोक दोहोरी गित सबै दर्शक स्रोताको नजरमा लोकप्रिय भन्दै गएका छन् । नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा एकपछी अर्को गर्दै निकै उत्कृष्ट गीत संगीत बजारमा आइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालिहरुको महान् पर्व वडा दशै नजिकिए संगै कलाकारहरुले दशै तिहारका […]
October 30, 2020 adminLeaveaComment on पहिलोपल्ट एक्लो केटी काठमान्डू छिरे,कैयौले सहयोग गर्ने बहानामा चान्स मार्न समेत पछी परेनन्,पुरा पढ्नुहोस
भनिन्छ मानिसको जीवनमा सुख दुख आउँछन् जान्छन् । मानिस सधै भरि सुखी पनि हुदैन् र दुखी पनि हुदैन् न अजम्बरी हुन्छ मान्छे त् नासिक हो । जिवनमा आएका आरोह अबरोह अनेक स्मरणीय यात्रा जुन मेरो लागि अझै कापी छन । मान्छेको जीवन पुर्ण छैन । मान्छे अनेको कुराको खोजिमा हुन्छ सन्तुष्टि कहिले हुन सक्दैन मान्छे […]
धन कमाउन कोरिया गएका ज्ञानेन्द्र दशैँका दिन कहिल्यै नफर्कने गरी बिदा भए !
October 30, 2020 adminLeaveaComment on धन कमाउन कोरिया गएका ज्ञानेन्द्र दशैँका दिन कहिल्यै नफर्कने गरी बिदा भए !
परदेशमा दशैँ नमनाइएकाले विजयादशमीका दिन घाम नउदाउँदै काममा निस्किएका उदयपुरका ज्ञानेन्द्र राई त्यसपछि कहिल्यै नफर्कने गरी बिदा भए । उनी इपिएस प्रक्रियामार्फत कोरिया आई करिब साढे तीन वर्षदेखि एक कटिङ कम्पनीमा कार्यरत थिए । उनको टीकाकै दिन कम्पनीमा काम गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको हो । उनका सहकर्मी तिलक पुनका अनुसार सोमबार बिहान १० […]
October 30, 2020 adminLeaveaComment on संगीतकार रुद्र श्रेष्ठकाे पूर्वेली गीत “काबेली खोला” सार्वजानिक (भिडियाे सहित)
काठमाण्डौ / पछिल्लो समय संगीतकार रुद्र श्रेष्ठको एरेन्जमा तथा सुमधुर संगीतमा रहेको “काबेली खोला”बोलको नयाँ पूर्वेली गीत दर्शक–स्रोतामाँझ लिएर आएका छन् । उत्त गीत पूर्वाञ्चल म्युजिक अफिसियल यूट्यूव च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको छ ।गीतमा गीतकार गायत्री लम्सालको शब्द रहेको छ भने संगीतकार रुद्र श्रेष्ठको संगीत तथा एरेन्ज रहेको छ । सरल र मिठासपूर्ण शब्दहरु र संगीत […]
October 30, 2020 adminLeaveaComment on डेढ वर्षीय छोराकी आमाको फेसबुकबाट अर्को पुरुषसँगको प्रेम देखेर दुनियाँ हैरान
प्रेम अन्धो हुन्छ हामीमध्य धेरैले सुनेका छौँ । यस्तै घटना अहिले भारतबाट बाहिर आएको छ । एक महिला उनको प्रेमीलाई भेट्न बिहारबाट उत्तर प्रदेशको बलिया पुगेकी छिन् । डेढ वर्षीय छोराकी आमासमेत रहेकी महिलाको प्रेम देखेर सबै हैरान छन् । तर प्रेमी भेट्न गएकी राधिकालाई उनकै प्रेमी रोशनले नियन्त्रणमा लिएको खुल्न आएको छ । जानकारी […]
अष्टमीको दिन छोराले सुरुमा बुवा मा’रे, त्यसपछि विरालो र भाले पनि मा’रे: भाई र आमाले यसरी भा’गे’र ज्यान जोगाए (भिडियो हेर्नुस्)
October 30, 2020 adminLeaveaComment on अष्टमीको दिन छोराले सुरुमा बुवा मा’रे, त्यसपछि विरालो र भाले पनि मा’रे: भाई र आमाले यसरी भा’गे’र ज्यान जोगाए (भिडियो हेर्नुस्)
दशैमा सबैतिर चहलपहल छ । ठूलाको आर्शिवाद लिन मानिसहरु घर गई रहेका छन् । आमा बाबुको हातको टिका लगाउन अवस्था सामान्य भए छोरा छोरी बिदेशबाट समेत घर फर्किन्छन् । तर दागंकी कमला विकको परिवारमा भने अर्कै घटना भएको छ । अष्टमीको निकै रमाइलो माहोल थियो । दुई छोरा र श्रीमान श्रमितिले रमाइलो गरी दशैं मनाउने […]